Inter Milan Oo Ciyaartoygeeda Aan U Dhalanin Talyaaniga U Sheegtay Inay Iskaga Baxaan Dalkaas - Gool24.Net
Inter Milan Oo Ciyaartoygeeda Aan U Dhalanin Talyaaniga U Sheegtay Inay Iskaga Baxaan Dalkaas
March 25, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa qaadatay go’aan adag oo ay ku jabinayso karantiilkii saarnaa ciyaartoygeeda, waxaanay u sheegtay ciyaartoyga aan dalkaas u dhalanin inay fasax u yihiin inay iskaga bixi karaan Talyaaniga.
Laacibkii ugu horreeyey ee ka baxay Talyaaniga ee ka faa’iidaystay fasaxan ayaa waxa uu noqday xiddiga reer Croatia ee Marcelo Brozovic oo gaadhay magaalada Zagreb ee caasimadda dalkiisa, halkaas oo uu ka dhacay dhul-gariid sababay dhaawaca 250 qof.
Goolhaye Samir Handanovic ayaa isaguna ku laabtay waddankiisa Slovenia, halka Diego Godin iyo Matis Vecino la filayo inay u safraan waddanka Uguguay.
Inter Milan ayaa go’aankan qaadatay markii ay u muuqatay in aanay muddada dhow kusoo laaban doonin tababarka oo uu Talyaanigu muddo aan la garanayn go’doon ku jiri doono, sabab la xidhiidha caabuqa Coronavirus oo dad badan ay ugu dhinteen dalkaas, ka badan 50,000 qof oo kalena ay u jiifaan.
Dhinaca kale, kooxda Juventus ayaa Arbacada jabin doonta Karantiilka, waxaase ay ciyaartoygeeda ku amraysaa inay iyagu takoor isku sameeyaan oo aanay guryahooda kasoo bixin, kaddib markii ay soo dhamaatay muddadii loo go’doomiyey xanuunka Coronavirus oo ku dhacay saddex ka mid ah ciyaartoyda kooxdaas.
Goolhayaha Atlanta ee Marco Sportiello ayaa isagana toddobaadkan horraantiisii laga helay caabuqa Coronavirus, waxaanu ku jiraa xaalad soo kabasho ah.
Inkasta oo ay xaaladdu sidan tahay, haddana kooxaha Napoli iyo Lazio ayaa doonaya inay sameeyaan tababarka oo ay si degdeg ah ugu soo laabtaan, inkasta oo aanay jirin ogolaansho dhinaca dawladda ah oo u fasaxaya inay ciyaartoydu meel iskugu iman karaan.